“कोहली क्रिकेटमा टाईम पास गरिरहेका छन्”, अफ्रिदी | khaltinews.com
“कोहली क्रिकेटमा टाईम पास गरिरहेका छन्”, अफ्रिदी
एजेन्सी । भारतिय पूर्व कप्तान विराट कोहलीको ब्याट लामो समयदेखि शान्त छ । झण्डै दुई वर्षसम्म उहाँको ब्याटबाट कुनै शतक आउन सकेको छैन । यति मात्र होइन, हालका दिनहरुमा विराटले अर्धशतकका लागि पनि संघर्ष गर्नु परिरहेको छ ।
यसै बिच पाकिस्तानका दिग्गज ब्याट्सम्यान शाहिद अफ्रिदीले विराट कोहलीको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ । ४२ वर्षीय पूर्व क्रिकेटरले भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहलीले अहिले क्रिकेटमा टाईमपास गरिरहेको बताउनु भएको छ ।
अफ्रिदीले हाल विराटको ब्याटिङमा १० वर्षअघि देखिने नम्बर १ मा पुग्ने इच्छा नदेखेको बताउनु भयो । विराटले हालै आफ्नो फर्मको बारेमा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा आफु आफ्नो जीवनको सबैभन्दा खुशीको क्षणमा बाँचिरहेको र संसारले उहाँको बारेमा के सोच्छ मतलब नभएको बताउनु भएको थियो ।
पाकिस्तानका पूर्व कप्तान अफ्रिदीले कोहली फर्ममा फर्कने वा नफर्कने उहाँको मनोवृत्ति कस्तो छ भन्नेमा भर पर्ने बताउनु भयो । “के उनी फेरि नम्बर एक बन्ने प्रयास गर्न चाहन्छन् वा आफूले हासिल गरेको कुरामा सन्तुष्ट छन् ”? अफ्रिदीले भन्नु भयो,“क्रिकेटमारवैया सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोहोलीको क्रिकेटप्रति लगाव छ कि छैन ? कोहली आफ्नो करियरको सुरुवातमा विश्व नम्बर एक ब्याट्सम्यान बन्न चाहन्थे, तर के उनी अहिले पनि त्यही प्रेरणाका साथ खेलिरहेका छन ? यो ठूलो प्रश्न हो । विराटको क्लास छ । तर, के उनी साँच्चै फेरि नम्बर एक बन्न चाहन्छन् ? किन विराटले जीवनमा सबैथोक हासिल गरेको महसुस गर्छन् । अब उनी आराम गरेर टाइमपास गर्न चाहन्छन् ? यो सबै उनको मनोवृत्ति मा निर्भर गर्दछ“ ।
भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहलीले आईपीएलको १५ औं सिजनमा खास केही गर्न सक्नु भएन । उहाँले यस सिजन दुई अर्धशतकको मद्दतमा ३ सय ४१ रन बनाउनु भए पनि तीन पटक गोल्डेन डकको सिकार हुनु भयो ।
कोहलीले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय करियरमा अहिलेसम्म १ सय १ टेस्ट, २ सय ६० एकदिवसीय र ९७ टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल्नु भएको छ । उहाँले टेस्टमा ८ हजार ४३ रन, एकदिवसीयमा १२ हजार ३ सय ११ रन र टी–२० मा ३ हजार २ सय ९६ रन बनाउनु भएको छ । कोहलीले टेस्टमा २७ र एकदिवसीयमा ४३ शतक प्रहार गर्नु भएको छ । तर, अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा उनको अन्तिम शतक नोभेम्बर २०१९ मा बंगलादेशविरुद्ध बनेको थियो ।